Momba anay - Gepair mesh
Gepairmesh dia mifantoka indrindra amin'ny famolavolana vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy ny fanamboarana, izay manana traikefa 20 taona amin'ity sehatra ity. Vatosoa vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy, vy tariby tariby, karazana volon-tànana vita amin'ny tanana izay ampiasaina betsaka amin'ny zoo mesh enclosure, aviary vorona, tohatra, rindrina maitso eo amin'ny rindrina inox ary ny tanimbary, haingon-trano vita amin'ny haingon-trano sy ny zavakanto, balustrade ary tady tariby. mavo-baravarana, fiarovana ary rafitra fiarovana.
Mesh vita kentam-bolo ho an'ny haingon-trano, manana lamba vita amin'ny metaly, mesh metatra nanitatra, rojo vy vita amin'ny valahana, sary marindrano vita amin'ny haingon-trano sy ny tarehy, sns.
Ny asantsika orinasa dia voaofana tsara sy mahay eo amin'ny sehatry ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita tànana. Manana rafitra QC tena hentitra izahay ary mandinika tsara alohan'ny, mandritra sy aorian'ny famokarana volabe. Nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay, dia mahazo hatrany ireo traikefa sarobidy momba ny famokarana sy ny varotra isika, ary misy fihenam-bidy lehibe amin'ny famolavolana sy ny varotra ivarotana. Ny vokatra dia naseho tany amin'ny tsenan'i Aostralia, Etazonia, Frantsa, Espaina, Meksika, Danemark, Sweden, Japon, Korea Atsimo, India, Singapore, Koety. Mifanaraka amin'ilay tanjona nifanaraka tamin'ny trosa, natsangana miaraka amin'ny kalitao, mandray tsara ny fiaraha-miasa avy amin'izao tontolo izao i Gepair Mesh amin'ny fototry ny fifampatokisana eo amin'ny fifampitokisana!
Paikady momba ny orinasa
Zava-kendreny •Mba ho mpitarika ao amin'ny indostrian'ny bolongam-bolo amin'ny alàlan'ny fanomezana vokatra mesh mahay kokoa, serivisy fanatsarana, fifandraisana ary ny tombom-barotra. Miaraha miombom-bidy amin'ireo mpanjifa mendrika antsika eran-tany.
fahitana •Manome serivisy kalitao mihoatra ny antenain'ny mpanjifa manome hasina antsika.
Mission •Hananganana fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifantsika sy ny mpanjifantsika ary manome serivisy mpanjifa miavaka amin'ny alàlan'ny fikatsahana orinasa amin'ny alàlan'ny fanavaozana sy ny teknolojia mandroso.
Sanda fototra Mino izahay amin'ny fitsaboana ny mpanjifantsika amin'ny fifanajana sy ny finoana; mitombo amin'ny alàlan'ny fahaiza-mamorona, famoronana ary fanavaozana isika; mampiditra ny fahatsoram-po sy ny fahamarinan-toetra ary ny etika fandraharahana isika amin'ny lafiny rehetra amin'ny asan'ny orinasa.